DHL 50 no mpanorina ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka haingana - RayHaber
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulDHL 50 no mpanorina ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka haingana
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, 49 Alemaina, EOROPEANINA, IZAO TONTOLO IZAO, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Faritra Marmara, TORKIA 0
mpanorina ny sehatry ny fitaterana rivotra haingana
DHL 1969, naorin'ireo namana telo izay nametraka tao 50 miaraka amin'ny hevitra hamindra ny antontan-taratasin'ny entana amin'ny alàlan'ny rivotra ao anaty paosy. mankalaza ny taonany. Amin'ny maha-solontenan'ny lozika vaovao ny antsasaky ny taonjato iray, dia nanao ny asan'ny mpisava lalana ny orinasa ankehitriny ary manohy manatsara ny varotra eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny tambajotra ao amin'ny firenena 220 sy faritra.
Fotoana fohy taorian'ny nialanenan'i Neil Armstrong tamin'ny volana dia nandrafitra hevitra i revolian'i Adrian Dalsey, Larry Hillblom ary Robert Lynn tamin'ny famindrana ireo antontan-taratasy fitaterana entana amin'ny alàlan'ny rivotra. Midika izany fa ny fombafomba fanao amin'ny kamiao dia afaka manomboka alohan'ny hahatongavan'ireo sambo ho any amin'izay alehany, ka ahena ny fotoana hiandrasana ny seranan-tsambo. Ny hevitra dia nanamarika ny fiandohan'ny indostria vaovao, ny fitaterana an'habakabaka haingana sy ny diany tokana an'i DHL.
50 Deutsche Post DHL Group, izay lasa iray amin'ireo orinasa logiste malaza eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, dia miasa mba hanamora ny fiainan'ny olona andavanandro sy tsy miankina amin'ny fitrandrahana azy ary ny vahaolana fitaterana. John Pearson, Tale Jeneralin'ny DHL Express, no 50 ao amin'ny orinasa sy ny indostrian'ny fitaterana haingana. Amin'ny fanombantombany
Olarak Amin'ny orinasa iray, faly izahay mahita fa nisy fiantraikany maharitra teo amin'ny sehatra miaraka amin'ireo serivisy maro novolavolaintsika mandraka ankehitriny. Izahay no mitsapa sy mampihatra ireo teknolojia maoderina mandritra ny rojistika famatsiana mba hahafahantsika hanao araka izay azo atao ny fandefasana ny fandefasana sy ny fandefasana ary ny hanohanana ny mpiasantsika amin'ny fitondran-dry zareo. Ho fanampin'ny fampiasana ny zava-misy marina sy ny vahaolana feno robotic amin'ny rojotra famatsiana, dia mirehareha aho fa nahita fomba vaovao hitaterana manokana amin'ny faritra sarotra hatonina. Ohatra, ny drone fonosana DHL manana otrik'aretina dia ahafahantsika mandefa fanafody haingana any amin'ny nosy lavitra any amin'ny Lake Victoria, ary ny mpanjifa iray any Sina dia mandray antontan-taratasy manan-danja indroa isan'andro. Ho fanampin'izany, ny StreetScooter, izay novolavolainay sy novokarinay manokana, dia nahafahanay nandray ny dingana voalohany hamahana ireo olana miatrika ny hoavin'ny sehatry ny lojika sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Pearson: "Haniry hazo 1 tapitrisa eran'izao tontolo izao isika amin'ity taona ity"
Ny fanondroana fa ny tarika Deutsche Post DHL dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, nanohina an'i Pearson mikasika ny tanjona famoahana tsy misy any amin'ny 2050 ary nilaza izy hoe: "Nametraka izany zava-dehibe lehibe izany ho an'ny vondrona izahay sy ireo kendrena an-tsitrapo napetraky ny tenanay tamin'ny taona 2025: Zero Emission X 2050 ao anatin'ny làlan'ny paikadintsika maharitra. Matoky aho fa ho afaka hahatratra izany amim-pahombiazana isika noho ny fampielezan-kevitra sy hetsika marobe izay natao tao anatin'ny fankalazana antsika. 50. Nanomana hetsika maro izahay tany amin'ny firenena maro maneran-tany. Ny anay anefa, ny zava-nitranga mahatalanjona indrindra tamin'ny taona dia ny fampielezana ny hazo Bryan Adams ho ampahany amin'ny fitsangatsanganana "Shine A Light", izay narahinay niaraka taminy ho mpiara-miombon'antoka lojika ofisialy. Miaraka isika maniry handray fihetsika fakan-tahaka amin'ny fiarovana ny toetrandro; Miara-miasa amin'i Bryan Adams, ny Arbor Day Foundation, Plant-for-the Planet, WeForest ary Taking Root, nampanantena izahay fa hamboly hazo isaky ny tapakila famerenana. Amin'ity taona ity dia hamboly hazo tapitrisa eran'izao tontolo izao isika. ”
Lassen: “50. Ny iray amin'ireo fampiasam-bola manan-danja indrindra eo amin 'ny taona any Torkia "
Ny DHL Express Torkia Filoha Tale Jeneralin'ny Claus lassen, dia nanomboka asa ao amin'ny 1981 ao Torkia ka nanao hoe: izy ireo 38 taona teo amin'ny tantara, "satria ny nitsanganany ho toy ny varotra eran-mpanamora ny asa eo isika, dia mampifandray Torkia amin'izao tontolo izao. Company fanondranana efa ho feno manolotra vokatra sy ny tolotra mba hahatonga izany ho mora tahaka ny fanaovana raharaham-barotra ao Torkia. Ankoatr'izay, ny orinasa misy antsika maneran-tany 50. taona amin'ny fotoana fankalazana, Faly izahay no manao ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ny fampiasam-bola any Torkia. Mikasa ny hanokatra ny foibe fandidiana vaovao izahay eo amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul, izay fampiasam-bola 135 tapitrisa manontolo ary efa eo an-dalam-pamoronana.
Taona 50 DHL
DHL, 2019 1969 dia orinasa nanangana orinasa telo tao San Francisco ao amin'ny 50. Taom-baovao. DHL dia nanapaka ny volavola amin'ny sehatry ny fandefasana nentim-paharazana miaraka amin'ny serivisy vaovao vaovao izay namoaka ny birao mba hanaterana tahirin-kevitra amin'ny rivotra amin'ny fotoana fohy. Nanomboka teo dia nanangana orinasa DHL manerantany ny DHL manana mpiasa 220 arivo ao amin'ny firenena sy faritra, ary mirakitra ny serivisy logiciel sy ny famatsiana serivisy. Ny mpanjifan'ny DHL sy ny kolotsaina 380, mpanjifan'ny mpanjifan-tsasatra 50 no solon'ny fanavaozana mandritra ny taona; Avy amin'ny DHL 1000, iray amin'ireo solosaina fanodinana teny voalohany eto amin'izao tontolo izao, avy amin'ny DHL Group ka Groupe an'i Deutsche Post DHL, StreetScooter, fiara fitaterana milamina sy mifono tontolo iainana Hedef DHL, miaraka amin'ny fanolorantenany hahatratra ny famoahana vondrona N 2050 vondrona ka hatramin'ny 0. manohy mitarika ny sehatry ny lozika.
ShipsGo, nankalaza ny taona fahatelo ny sehatra nomerika amin'ny indostrian'ny fitaterana entona 11 / 03 / 2019 Tiorkia voalohany shipsgo dranomasina sehatra nomerika izay mankalaza ny taona fahatelo tahaka ny tamin'ity herinandro ity. Ilay lampihazo, izay napetraka mba hanompoana ny orinasam-barotra avy any ivelany, ireo mpandefa entana sy ny mpitatitra entana, dia ampiasaina any amin'ireo firenena 160. 11 martsa Nanomboka tamin'ny 2016 ny orinasa ary nampitombo ny isa sy ny kalitaon'ny serivisy nandritra ny taona 1 farany. Noho ny algorithm tsy manam-paharoa mifototra amin'ny analytics data lehibe, izay nomena anarana hoe t Octopus ucu, izay hita fa vokatry ny fandalinana nataon'ny R&D natao tao amin'ny Fampandrosoana ny Teknolojia Dokuz Eylül, ireo mpampiasa azy; afaka manolotra vidiny ambany kokoa, fotoana fitaterana ary safidy malalaka kokoa amin'ny seranan-tsambo. ShipsGo koa dia manana rojo famatsiana fitaterana an-dranomasina…
Ireo solontenan'ny sehatra fitaterana TCDD sy Logistics Met 15 / 12 / 2016 Ireo solontenan'ny sehatra fifindran'ny TCDD sy Logistics Met: Mpifanaraka TCDD, mpamatsy fiarandalamby ary mpitily enta-mavesatra, tonga tao Ankara ny manampahefana UTİKAD sy DTD. 9 Desambra Ny fihaonamben'ny fikambanan'ny mpiandraikitra ny fifindra-monina TCDD Kurt, ny Lehiben'ny Tale Jeneraly Mehmet Uras sy ny lehiben'ny sampana dia nanatrika ny fivoriana natao tao Ankara tamin'ny volana desambra 2016. Veysi Kurt no nanao ny lahatenin'ny fivoriana; 14 June 2016 dia nanambara fa ny TCDD Taşımacılık AŞ dia nanomboka niasa ho orinasan'ny orinasam-panjakana 100 isan-jato ary ny fe-potoana lehibe indrindra amin'ny fizotran'ny liberalisation dia ny fanombohan'ny TCDD Taşımacılık AŞ. Tohizo ny tenyo ...
Ny hoavin'ny tontolon'ny seranam-piaramanidina amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao 09 / 05 / 2019 Araka ny tatitra 2019 nomanin'ny KPMG ao amin'ny sehatra fitaterana, ny sehatry ny fitaterana tatitra, fiomanana amin'ny taona sarotra miaraka amin'ny fiandrasana ny fitomboan'ny fitomboan'ny toe-karena manerantany sy ny haavon'ny varotra, dia handresy mora 2019 mora indrindra noho ny toerany ara-jeografika sy ny fitantanana ny toekarena amin'ny raharaham-barotra ivelany. Na dia izany aza, araka ny tatitra, miantoka ny fahombiazan'ny sehatra, ny teknolojia vaovao dia manitsy haingana. KPMG Torkia voaharoharo araka ny Transport Outlook Sehatra maromaro tatitra, mampiseho ny andrasana ara-toekarena maneran-tany ao amin'ny 2019 mihena firy ihany koa ny vokany eo amin'ny sehatry ny fitaterana. Araka ny tatitra, ny tsy fahampian'ny fifanakalozana amin'ny vidin'ny fifanakalozana sy ny vidin'ny solika amin'ny vanim-potoana farany dia nanery mafy ny sehatra. Miaraka amin'ny fiantraikan'ny tsy fitovian-kevitra amin'izao fotoana izao, mitohy ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao.
Railway Transport Atrikasa (Manamafy Orina Intermodal Fitaterana ao Torkia ao anatin'ny faritry ny Vondrona Eoropeana tetikasa) 19 / 09 / 2013 Manamafy Orina ny Intermodal Fitaterana ao Torkia EU Project Sehatra dalamby Transport Atrikasa: ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Fifandraisana Maritime Minisitry ny Fitaterana natao tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Espaina "Nanatanjaka Intermodal Fitaterana ao Torkia Twinning 2 Project. Singa ao amin'ny "Fiomanana Intermodal Transport lalàna", ny 18 2013 tao Ankara tamin'ny Jona, "Railway Fitaterana", atrikasa nokarakaraina. Ny tetikasa 2. Ny tanjon'ity singa ity dia ny mamolavola drafitran'ny lalàna momba ny fifanaraham-piantohana amin'ny fitaterana entana entana. Ny atrikasa dia nanatrehan'ireo manam-pahaizana, mpandahateny ary solontenan'ny tontolon'ny lalamby avy amin'ny fitondrana Espaniola. Ao amin'ny atrikasa, Torkia dia ho ampiharina amin'ny lalamby, izay afaka manome ny tosika ny intermodality ny fepetra sahaza indrindra miaraka ...
Fitaterana Railway amin'ny toetry ny toetr'andro 22 / 03 / 2013 Fitaterana Railway amin'ny toetran'ny toetr'andro Tsy ilaina ny mamorona tontolo maitso sy madio ho an'ny ho avin'ny ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana izao dia mitarika ny politika sy ny fampiasam-bola hampiharina manerana izao tontolo izao. Amin'izany toe-draharaha izany, ireo firenena ao amin'ny EU dia nanatsara ny rafitra ara-bolany ary nanatsara ny fahaizan'izy ireo tamin'ny famatsiana ny fizakantenan'ny fitantanam-pitantana mifanaraka amin'ny tondrozotra 91 / 440 amin'ny sehatry ny arabe. Vondrona Eoropeana; ele Eo am-pijerena ny fitaterana ho toy ny fanalahidin'ny toekarena maoderina, ary miezaka ny hampitombo ny fandanjana ny politikan'ny fitaterana ho an'ny lalamby, sambo amoron-dranomasina ary eny amin'ny ony.
Valiny amin'ny governemantan'i Bilecik: 'Fa maninona ny YHT no tsy milaza ny lesoka amin'ny làlana?'
ShipsGo, nankalaza ny taona fahatelo ny sehatra nomerika amin'ny indostrian'ny fitaterana entona
Ireo solontenan'ny sehatra fitaterana TCDD sy Logistics Met
Ny hoavin'ny tontolon'ny seranam-piaramanidina amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao
Railway Transport Atrikasa (Manamafy Orina Intermodal Fitaterana ao Torkia ao anatin'ny faritry ny Vondrona Eoropeana tetikasa)
Niresaka momba ny hoavin'ny sehatry ny logistics tany Mersin
Bursa raharaham-barotra iraisam-pirenena misahana ny fiara fitateram-bidy
Mitohy miasa ny BTSO amin'ny fiara fitaterana Air Cargo
Ny BTSO Logistics Inc. dia manomboka ny fitaterana entana entona any Yenişehir